Izindaba - Ingcindezi yokwelashwa ngokushisa kanye nokuhlukaniswa kwe-sprocket yesithuthuthu
Ingcindezi yokwelashwa ngokushisa ingahlukaniswa kube ukucindezela okushisayo nokucindezela kwezicubu. Ukuhlanekezelwa kokwelashwa kokushisa kwe-workpiece kungumphumela womphumela ohlangene wokucindezela okushisayo nokucindezela kwezicubu. Isimo sokucindezelwa kokwelashwa kokushisa ku-workpiece kanye nomphumela okukubangelayo kuhlukile. Ukucindezeleka kwangaphakathi okubangelwa ukushisa okungalingani noma ukupholisa kubizwa ngokuthi ukucindezeleka okushisayo; ukucindezeleka kwangaphakathi okubangelwa ukungalingani kwesikhathi sokuguqulwa kwezicubu kubizwa ngokuthi ukucindezeleka kwezicubu. Ngaphezu kwalokho, ukucindezeleka kwangaphakathi okubangelwa ukuguqulwa okungalingani kwesakhiwo sangaphakathi se-workpiece kubizwa ngokuthi ukucindezeleka okwengeziwe. Isimo sokugcina sokucindezeleka nosayizi wokucindezeleka wokwenza umsebenzi ngemuva kokwelashwa kokushisa kuncike kwisibalo sokucindezeleka okushisayo, ukucindezela kwezicubu kanye nengcindezi eyengeziwe, ebizwa ngokuthi ukucindezeleka okusele.
Ukuhlanekezelwa nokuqhekeka okwenziwe ngophawu lomsebenzi ngesikhathi sokwelashwa kokushisa kungumphumela womphumela ohlangene walezi zingcindezi zangaphakathi. Ngasikhathi sinye, ngaphansi komthelela wengcindezi yokwelashwa ukushisa, kwesinye isikhathi ingxenye eyodwa yomsebenzi isesimweni sokuxineka kokuqina, enye ingxenye isesimweni sokucindezelwa kokucindezelwa, kwesinye isikhathi ukusatshalaliswa kwesimo sokucindezeleka kwengxenye ngayinye kokusebenza kungahle kube nzima kakhulu. Lokhu kufanele kuhlolisiswe ngokwesimo sangempela.
1. Ukucindezeleka okushisayo
Ukucindezela okushisayo kungukucindezeleka kwangaphakathi okubangelwa ukunwetshwa kwevolumu engalingani nokusikwa okubangelwe ngumehluko wokushisa noma wokupholisa isilinganiso phakathi kobuso bendawo yokusebenza nendawo emaphakathi noma izingxenye ezincane nezishubile ngesikhathi sokwelashwa kokushisa. Ngokuvamile, lapho izinga lokushisa noma lokupholisa lishesha ngokushesha, kukhula kakhulu ukucindezeleka okushisayo.
2. Ukucindezeleka kwezicubu
Ukucindezeleka kwangaphakathi okudalwe yisikhathi esingalingani soshintsho oluthile lwevolumu olubangelwa ukuguqulwa kwesigaba kubizwa ngokuthi ukucindezela kwezicubu, okubizwa nangokuthi yingcindezi yokuguqulwa kwesigaba. Ngokuvamile, ivolumu ethize iba nkulu ngaphambi nangemva kokuguqulwa kwesakhiwo sezicubu futhi kukhulu umehluko wesikhathi phakathi kwezinguquko, kukhula ukucindezeleka kwezicubu.